ရင်ခုန်စရာ အတွင်းသားအလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းဆုဦးရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ပရိသတ် တွေ အချစ်ပို ရတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး နန်းဆုဦး က တော့ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေး လေ့ ရှိပါ တယ် … . သူမ က တော့ ယခု မှာ အသား အရေ စိုပြေပြီး အိမ် နေရင်း ပုံစံလေး နဲ့ တောင် အရမ်း ချစ်စရာ ကောင်း နေကာ ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ လှပနေတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင် လေး ကို ချပြလာ ခဲ့ပါ တယ် … . အမိုက် စား ပုံစံ လေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင် လေးဟာ ပရိ သတ် တွေ ကို အချစ် တွေ ပိုစေ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … . ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ် ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင် အမာ ရယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ က တော့ ” ဒီရင်ထဲ ကို ဝင်ကြည့် လှည့် နင်သိဖို့ “ ဆိုပြီး ကြွေ လောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် လေး နဲ့အတူ ရေးသား ထားခဲ့ တာပဲဖြစ် ပါ တယ် … .
ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မင်းသမီး ချော လေး နန်းဆုဦးရဲ့ အမိုက် စား ပုံစံလေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်း လွန်းတဲ့ Tiktok ဗီဒီ ယို ဖိုင်လေး ကို ပြန် လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပြီး အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင် လေး ကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင် ပါ တယ်..။မင်းသမီး ချောလေး နန်းဆုဦး ကတော့ အောင်မြင် လျက် ရှိနေပြီဖြစ် တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ် ပြီး ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေး မှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်..။ အနုပ ညာအလုပ်တွေ ကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေပြီး အနုပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ် ကားကြီးတွေ ကိုလည်း ရိုက်ကူး လျက် ရှိနေ သူလေးပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် … .
ပရိသတ္ ေတြ အခ်စ္ပို ရတဲ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး နန္းဆုဦး က ေတာ့ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္ တင္ေပး ေလ့ ရွိပါ တယ္ … . သူမ က ေတာ့ ယခု မွာ အသား အေရ စိုေျပၿပီး အိမ္ ေနရင္း ပုံစံေလး နဲ႔ ေတာင္ အရမ္း ခ်စ္စရာ ေကာင္း ေနကာ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ လွပေနတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ ေလး ကို ခ်ျပလာ ခဲ့ပါ တယ္ … . အမိုက္ စား ပုံစံ ေလး နဲ႔ ေႂကြေလာက္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္ ေလးဟာ ပရိ သတ္ ေတြ ကို အခ်စ္ ေတြ ပိုေစ ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … . ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္ အမာ ရယူထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ က ေတာ့ ” ဒီရင္ထဲ ကို ဝင္ၾကည့္ လွည့္ နင္သိဖို႔ “ ဆိုၿပီး ေႂကြ ေလာက္ စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလး နဲ႔အတူ ေရးသား ထားခဲ့ တာပဲျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ မင္းသမီး ေခ်ာ ေလး နန္းဆုဦးရဲ့ အမိုက္ စား ပုံစံေလး နဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္း လြန္းတဲ့ Tiktok ဗီဒီ ယို ဖိုင္ေလး ကို ျပန္ လည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ ၿပီး အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေလး ကို ေအာက္မွာ ၾကည့္နိုင္ ပါ တယ္..။မင္းသမီး ေခ်ာေလး နန္းဆုဦး ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ လ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္ တဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ၿပီး ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္အားေပး မႈ ကို အခိုင္အမာ ရယူထားနိုင္ခဲ့ ပါတယ္..။ အႏုပ ညာအလုပ္ေတြ ကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေနၿပီး အႏုပညာ ေလာက မွာ ေနရာ တစ္ခုကို ရယူထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ ကားႀကီးေတြ ကိုလည္း ရိုက္ကူး လ်က္ ရွိေန သူေလးပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပူလွန်းတဲ့ နေရောင်အောက်မှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရင်ထဲကဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ပြသလိုက်တဲ့ မေပန်းချီနဲ့ ခရစ္စတီးနား
Next post သနပ်ခါးကန်ပိန်းလုပ်မယ့် လူထုကို အားပေးရင်း ကိုဗစ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့ သတိပေးစကားပြောလိုက်တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်